Mr Programmer (www.mr-programmer.com): မြန်မာနိုင်ငံပညာရေး နိမ့်ကျနေပြီလား။
Posted by Mr. Programmer at 3/14/2007 02:47:00 PM
ကျွန်တော့် အမြင်ကတော့ ရွှေဒင်္ဂါး ကုမ္ပဏီက သူတို့ပိုက်ဆံရရင်ပြီးရော သတင်း အချက်အလက် မရလို့မျက်စိပိတ်၊ နားပိတ်ဖြစ်နေတဲ့ သူတွေကို လုပ်စားနေတာဗျ။
တချိန်တုန်းကလည်း (ခုထက်ထိပါပဲ) ဗမာပြည်က အမှတ်အကောင်းဆုံးနဲ့အောင်တဲ့ ကျောင်းသား တော်တော်များများဟာ သူတို့ အရည်အချင်းနဲ့မထိုက်တန်တဲ့ Poly Schools တွေရဲ့ ဆွယ်ရာကို ပါသွားကြပါတယ်။ တကယ့်ကို စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။ အဲ့ဒီတုန်းက Poly Schools တွေမှာ မြန်မာကျောင်းသားတွေ အရမ်းထူးချွန်တဲ့ သတင်းကြားရရင် ရင်နာတယ်။ ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ အဲ့ဒီကျောင်းသာတွေဟာ Universities တွေ တက်ပြီး ဒီထက်အဆင့်မြင့်တဲ့ ပညာတွေ သင်ကြားနေရမှာဗျ။
Poly ပြီးလို Degree တစ်ခုရဖို့ရုန်းကန်ကြိုးစားနေကြရတဲ့ ကျွန်တော် သူငယ်ချင်းတွေတွေ့ ရင် တကယ်စိတ်မကောင်းဘူး။ မိဘတွေကလည်း အသုံးမကျဘူး။ နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းသွား တက်ရမယ်၊ ပြီးရင် အလုပ်ရနိုင်တယ် ဆိုတာလောက်ပဲ နားလည်တာ။ အများစုက မိဘတွေကလွှတ်လို့Poly သွားတက်နေရတာဗျ။
Engineering ဆို မြန်မာပြည်က ဘွဲ့ ရပြီး တော်တယ်ဆို ဒီက NUS , NTU မှာ Master လာတက်လို့ ရတယ်။ Computer မှာလည်း မြန်မာပြည်က ဘွဲ့ တွေနဲ့တော်ရင် ဒီမှာ Master တက်လို့ ရတာပဲ။ There arealot of cheaper and shorter ways to getadegree
I think it is quite outrageous and irressponsible advertisement.
I think an average graduate fromaSingapore university is priobably better qualified than an average graduate from Burma. Moreover I dont mindaBachelor degree holder from social science such as history or Burmese may go to ITE to get real world employable skills, I dont thinkagraduate holdingaBachelor in Technology should or would go to an ITE unless he is exploited by irressponsible business men or by lure of overseas working opportunities.
Junta? Journal? Shwe Dingar?
Where are the responsibilities of Junta's ministry of education?
Where are the ethics of Journal?
Where are the standards of Shwe Dingar?
First of all, we have to blame our own lack of knowledge and exposure. It is sad to see young talented Burmese with college calibre crowding at non-degree conferring tertiary educational institutes; some lack of information, financial resources or job opportunitites.
Secondly, it is Ministry of Information is to blame as they are busy censoring petty things like bullshit stuff trying to choke off opposition while ignoring educating public and youth.
Thirdly, it is buy out journalists and business people as those suckers will sell their own mothers if someone pay them enough.